မန်ချက်စတာကနေဒါမှမဟုတ်ရန်အလုပ်အမှုဆောင်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်း, Nashua, Concord, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးနယူးဟမ်းရှားလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 866-945-4099 စီးပွားရေးအဘို့အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုဧရိယာပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျ New Hampshire အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျ New Hampshire ဧရိယာ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီချက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏အချည်းနှီးသောပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
New Hampshire အတွက် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထွက် Check.
Amherst, နယူးဟမ်းရှား ဒိုဗာ, နယူးဟမ်းရှား Londonderry, နယူးဟမ်းရှား ပို့စ်မောက်, နယူးဟမ်းရှား
Bedford, နယူးဟမ်းရှား Goffstown, နယူးဟမ်းရှား မန်ချက်စတာ, နယူးဟမ်းရှား Rochester, နယူးဟမ်းရှား
Claremont, နယူးဟမ်းရှား စိတ်အားထက်သန်, နယူးဟမ်းရှား Merrimack, နယူးဟမ်းရှား လမ်, နယူးဟမ်းရှား
Concord, နယူးဟမ်းရှား Laconia, နယူးဟမ်းရှား Nashua, နယူးဟမ်းရှား Somersworth, နယူးဟမ်းရှား
Derry, နယူးဟမ်းရှား လေဗနုန်တော, နယူးဟမ်းရှား Pelham, နယူးဟမ်းရှား Windham, နယူးဟမ်းရှား
ကျွန်တော်မန်ချက်စတာမှာအမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဂျက်လေယာဉ်ကွင်းတည်နေရာများစာရင်း, Nashua, Concord, New Hampshire ဧရိယာ သငျသညျအနီးအာကာသလေယာဉ်ပျံလေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်
commercial service - မူလတန်းလေဆိပ်
လေဗနုန်တော LEB LEB KLEB လေဗနုန်တောစည်ပင်သာယာလေဆိပ် P-N ကို 10,953
မန်ချက်စတာ မထသ မထသ KMHT မန်ချက်စတာ-ဘော်စတွန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-S က 1,190,082
ပို့စ်မောက် PSM PSM KPSM Peas မှာပို့စ်မောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 24,408
Nashua ASH ASH KASH Nashua လေဆိပ် (field သောက်စရာ) R ကို 48
ဘာလင် BML BML KBML ဘာလင်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (ဘာလင်စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA 10
Claremont CNH CNH KCNH Claremont စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 2
Concord နဲ့ နဲ့ KCON Concord စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 435
Haverhill 5B9 ဒင်းသတိရအောက်မေ့လေဆိပ် GA 2
Jaffrey AFN AFN နင်စေ Jaffrey လေဆိပ်-ငွေ Ranch GA 33
စိတ်အားထက်သန် တစ်ဦးက တစ်ဦးက စိတ်အားထက်သန် Dillant-Hopkins လေဆိပ် GA 45
Laconia LCI LCI KLCI Laconia စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 212
Newport 2B3 NWH Parlin ဖျော်ဖြေမှု GA 2
Plymouth 1P1 Plymouth စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 5
Rochester ဒေါ် KDAW Skyhaven လေဆိပ် GA
Whitefield HIE HIE K သည်ः ia တောင်ပေါ်ကဝါရှင်တန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 4
အော်တန်ဂလားပင်လယ်အော် B18 အော်တန်ဂလားပင်လယ်အော်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
Bristol က 2n2 အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ချိုင့်လေဆိပ်
Colebrook 4C4 Gifford ဖျော်ဖြေမှု 2
Errol မှားယွင်း မှားယွင်း Kerr Errol လေဆိပ် 2
Franconia 1ခ5Franconia လေဆိပ်
Gorham 2G8 Gorham လေဆိပ်
Hampton 7B3 Hampton လေယာဉ်ကွင်း 
သမင်ဒရယ် 8B1 Hawthorne-Feather Airpark 6
Moultonborough 5M3 Moultonboro လေဆိပ် 1
တောင်ထိပ်ညီနောင် 8B2 အမွှာတောင်တန်းလေဆိပ် 
Hampton NH35 Fisher ကသိပ္ပံရဟတ်ယာဥ်ကွင်း 13
Loudon NH59 မောင်းပြိုင်ပွဲရဟတ်ယာဥ်ကွင်း 
Pembroke NH33 ဘရစ်ဂ်ဟမ်ရဟတ်ယာဥ်ကွင်း 200
Wolfeboro NH31 Mountain View ဖျော်ဖြေမှု 9
မြောက်အမေရိက Conway ခွေးလေး White ကတောင်လေဆိပ် (1930-1988) 
မန်ချက်စတာမှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာ, Nashua, Concord, နယူးဟမ်းရှားထိပ်တန်းညပွဲလမ်း, ငါ၏အဧရိယာတဝိုက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်မိန်း | ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားနှုန်းထားများမန်ချက်စတာ